တရုတ်နိုင်ငံရှိကြံ့ခိုင်ရေးဆိုင်ရာအ ၀ တ်အထည်၊ လက်ရှည်၊ ယောဂအထည်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ
Guangzhou LIDONG Garment Industrial Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Distributor/Wholesaler , Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Middle East , Americas , East Europe , Oceania , West Europe ထုတ်ကုန်:21% - 30% ဖေါ်ပြချက်:ကြံ့ခိုင်ရေးအဝတ်အစား,လက်ရှည်အကျီင်္,ယောဂအဝတ်အစား,Gtm လက်ရှည်အကျီင်္,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ကြံ့ခိုင်ရေးအဝတ်အထည် > ယောဂဝတ်ဆင်ခြင်း
ယောဂဝတ်ဆင်ခြင်း ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ကြံ့ခိုင်ရေးအဝတ်အစား, လက်ရှည်အကျီင်္ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ယောဂအဝတ်အစား R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
OEM မြင့်မားခါးလောက်အမျိုးသမီးများနေ့ယောဂဘောင်းဘီ Leggings
polyester Tank အားကစားကြံ့ခိုင်ရေးအမျိုးသမီးများနေ့သည်ကထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်ကထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်
လက်ဝါးကပ်တိုင် V ကို Band အမျိုးသမီးများနေ့အားကစားရုံလေ့ကျင့်ခန်းအားကစားတင်းကျပ်စွာ
တင်းကျပ်စွာလေ့ကျင့်ခန်းကြံ့ခိုင်ရေးမြင့်မားခါးလောက် Capris ယောဂဘောင်းဘီ
နောက်ဆုံးပေါ် Ladies လေ့ကျင့်ခန်းဖြတ်ထားအားကစားရုံတင်းကျပ်စွာကြံခိုင်ရေး
custom ယောဂဘောင်းဘီအမျိုးသမီးများနေ့အားကစား Leggings
အမြိုးသမီးမြားအဘို့အ legging custom ယောဂကိုယ်တော်ကိုဟစ်ကြော်ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း
အမျိုးသမီးများနေ့ကြံ့ခိုင်ရေး Capris ယောဂဘောင်းဘီ Leggings စိတ်တိုင်းကျ
အားကစား Leggings လက်ကားကို run အမျိုးသမီးများနေ့
Pocket နှင့်အတူ High Quality လေ့ကျင့်ခန်းယောဂဘောင်းဘီ
mesh လေ့ကျင့်ခန်း Legging နှင့်အတူအနက်ရောင်ယောဂဘောင်းဘီ
ဤအားကစားရုံအားကစား ၀ တ်စုံများကိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီး၊ acrylic, spandex နှင့် polyester ကဲ့သို့သောအထူးအကြံပြုထားသောပစ္စည်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီးမျက်လုံးအရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခါးမည်မျှပင်ရှိပါစေ elastic waist feature နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သငျသညျယောဂ leggings များအတွက်...
ဒါဟာ OEM များအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂို print ထုတ်။ 88% polyester, ပစ္စည်း၏ 12% spandex ။ , ထူးအိမ်သင်ပျော့ပျောင်းချောမွေ့နှင့်အဆင်ပြေ။ ထူးချွန်လမ်းပိုင်းနှင့်ခံနိုင်ရည် Creating အလျင်အမြန်ခြောက်သွေ့။ စက်ရေဆေး, အခြောက် tumble ။ ပေါကျကှဲအနားလွယ်ကူသော movement.High အရည်အသွေး, ကထုတ်လုပ်အဆင်ပြေ,...
ကျနော်တို့ထုံးစံကဒီယောဂဝတ်စုံနှင့် OEM လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်နိုင်နှင့်ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုပေါ်တွင်တင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိုအရည်အသွေးမြင့်မား, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် Eco ဖော်ရွေသည်။ ဒါဟာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအဆင်ပြေကြံ့ခိုင်ရေးအစုံပါပဲ။ ပေါ့ပါးခြင်းနှင့် breathable ဒီတော့အားလုံးရာသီများအတွက်စုံလင်သည်။...
OEM ရရှိနိုင်ပါစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာထုံးစံအဘို့ဤစတိုင်နှင့်ပုံနှိပ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်င်နှင့်သင့်တောင်းဆိုချက်ကို accordting သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂို လုပ်. ချယ်လှယ်။ 85% polyester နှင့်သူတော်ကောင်းတရား Print နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်း၏ 15% spandex ။ သင်ဤယောဂဘောင်းဘီဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာဒါဟာဖက်ရှင်အဆင်ပြေ, စတိုင်, sexy,...
အထည်အလိပ်အကြောင်းအရာ: 85% polyester နှင့်ပစ္စည်းများ၏ 15% spendex ။ OEM နဲ့ထုံးစံကဒီစတိုင်အဘို့အမရရှိနိုင်ပါ။ ပုံသဏ္ဍာန်သို့မဟုတ်အရောင်ရှုံးဘယ်တော့မှမ။ စူပါဖျ, Matt Finish ကို - ချွေးမပြထားဘူး။ ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ Slim တင်ပါး & ပေါင်။ LIFT နှငျ့သငျ လုပ်. ချယ်လှယ်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ် yor ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုချင်သည်သင်၏...
ထုံးစံကဒီစတိုင်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုပေါ်တွင်တင် OEM များအတွက်ရရှိနိုင်။ , ဖက်ရှင်စတိုင်နှင့်ခေတ်သစ်ယောဂ။ နွေရာသီကပိုသင့်လျော်ခြင်းနှင့်အေးမြစတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ , တောင်တက် Go ရွရွပြေးခြင်းနှင့်ယောဂပြုပါ, စတာတွေကတမူထူးခြားတဲ့ယောဂအင်္ကျီစတိုင်င်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လှပသောတူသောရှာဖွေနေ။ 95% polyester, ပစ္စည်း၏ 5%...
အဆိုပါစွယ်စုံဒီဇိုင်းအားကစားရုံသို့မဟုတ်အပန်းဖြေဤ leggings ကြီးမြတ်စေသည်။ မြင့်မားတဲ့လမ်းပိုင်း bespoke TLC ထည်ကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကွက်။ OEM ရရှိနိုင်ပါစေနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂို print ထုတ်ချင်လျှင်, ငါတို့သည်ကြောင့်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပုံစေနိုင်သည်။ sexy,...
အမြိုးသမီးမြားအတှကျကြံ့ခိုင်ရေး Leggings ကျား: အမျိုးသမီးများနေ့ ပစ္စည်း: 87% နိုင်လွန်နဲ့ 13% spandex Size: S, M, L, XL feature: Comfortable, အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ elasticity: အမြင့် elasticity - ထောက်ခံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, elastic ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေပစ္စည်း Features ခါး: အမြင့်ထ -...
Pocket နှင့်အတူတင်းကျပ်စွာလေ့ကျင့်ခန်းကြံ့ခိုင်ရေးမြင့်မားခါးလောက် Capris ယောဂဘောင်းဘီ ကျား: အမျိုးသမီးများနေ့ ပစ္စည်း: 87% နိုင်လွန်နဲ့ 13% spandex Size: S, M, L, XL feature: Comfortable, အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ elasticity: အမြင့် elasticity - ထောက်ခံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, elastic...
လက်ကားလေ့ကျင့်ခန်းဘေးထွက်ကြံ့ခိုင်ရေးတင်းကျပ်စွာ Pockets ကျား: အမျိုးသမီးများနေ့ ပစ္စည်း: 87% နိုင်လွန်နဲ့ 13% spandex Size: S, M, L, XL feature: Comfortable, အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ elasticity: အမြင့် elasticity - ထောက်ခံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, elastic ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေပစ္စည်း Features ခါး: အမြင့်ထ -...
နောက်ဆုံးပေါ် Ladies ဘေးထွက်လေ့ကျင့်ခန်းဖြတ်ထားအားကစားရုံတင်းကျပ်စွာကြံ့ခိုင်ရေး Pockets ကျား: အမျိုးသမီးများနေ့ ပစ္စည်း: 87% နိုင်လွန်နဲ့ 13% spandex Size: S, M, L, XL feature: Comfortable, အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ elasticity: အမြင့် elasticity - ထောက်ခံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, elastic...
custom ယောဂဘောင်းဘီအမျိုးသမီးများနေ့အားကစား Leggings ကျား: အမျိုးသမီးများနေ့ ပစ္စည်း: 87% နိုင်လွန်နဲ့ 13% spandex Size: S, M, L, XL feature: Comfortable, အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ elasticity: အမြင့် elasticity - ထောက်ခံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, elastic ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေပစ္စည်း Features ခါး: အမြင့်ထ -...
အမြိုးသမီးမြားအဘို့အ legging စက်ရုံစေစိတ်တိုင်းကျယောဂကိုယ်တော်ကိုဟစ်ကြော်ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း ကျား: အမျိုးသမီးများနေ့ ပစ္စည်း: 87% နိုင်လွန်နဲ့ 13% spandex Size: S, M, L, XL feature: Comfortable, အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ elasticity: အမြင့် elasticity - ထောက်ခံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, elastic...
အမျိုးသမီးများနေ့ဘေးထွက်ကြံ့ခိုင်ရေး Capris ယောဂဘောင်းဘီ Leggings စိတ်တိုင်းကျ Pockets ကျား: အမျိုးသမီးများနေ့ ပစ္စည်း: 87% နိုင်လွန်နဲ့ 13% spandex Size: S, M, L, XL feature: Comfortable, အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ elasticity: အမြင့် elasticity - ထောက်ခံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, elastic...
အားကစား Leggings လက်ကားကို run အမျိုးသမီးများနေ့ ကျား: အမျိုးသမီးများနေ့ ပစ္စည်း: 87% နိုင်လွန်နဲ့ 13% spandex Size: S, M, L, XL feature: Comfortable, အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ elasticity: အမြင့် elasticity - ထောက်ခံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, elastic ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေပစ္စည်း Features ခါး: အမြင့်ထ -...
Pocket နှင့်အတူ High Quality လေ့ကျင့်ခန်းယောဂဘောင်းဘီ ကျား: အမျိုးသမီးများနေ့ ပစ္စည်း: 87% နိုင်လွန်နဲ့ 13% spandex Size: S, M, L, XL feature: Comfortable, အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ elasticity: အမြင့် elasticity - ထောက်ခံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, elastic ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေပစ္စည်း Features ခါး: အမြင့်ထ -...
side က Black ကြံ့ခိုင်ရေး Capri Leggins အမျိုးသမီးများအမြင့်ခါးယောဂ Capris Pockets ကျား: အမျိုးသမီးများနေ့ ပစ္စည်း: 87% နိုင်လွန်နဲ့ 13% spandex Size: S, M, L, XL feature: Comfortable, အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ elasticity: အမြင့် elasticity - ထောက်ခံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, elastic ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေပစ္စည်း...
mesh လေ့ကျင့်ခန်း Legging နှင့်အတူအနက်ရောင်ယောဂဘောင်းဘီ ကျား: အမျိုးသမီးများနေ့ ပစ္စည်း: 87% နိုင်လွန်နဲ့ 13% spandex Size: S, M, L, XL feature: Comfortable, အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ elasticity: အမြင့် elasticity - ထောက်ခံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်အဘို့, elastic ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေပစ္စည်း Features ခါး: အမြင့်ထ -...
တရုတ်နိုင်ငံ ယောဂဝတ်ဆင်ခြင်း ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် ယောဂဝတ်ဆင်ခြင်း အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ ကြံ့ခိုင်ရေးအဝတ်အစား,လက်ရှည်အကျီင်္,ယောဂအဝတ်အစား,Gtm လက်ရှည်အကျီင်္,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် ယောဂဝတ်ဆင်ခြင်း ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ ယောဂဝတ်ဆင်ခြင်း အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးအဝတ်အစား,လက်ရှည်အကျီင်္,ယောဂအဝတ်အစား,Gtm လက်ရှည်အကျီင်္,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ ယောဂဝတ်ဆင်ခြင်း အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
ကြံ့ခိုင်ရေးအဝတ်အစား လက်ရှည်အကျီင်္ ယောဂအဝတ်အစား Gtm လက်ရှည်အကျီင်္ ကြံ့ခိုင်ရေးအဝတ်အထည်